ဖော်ကောင် သို့မဟုတ် MPDF ဗိုလ်ထွန်းတောက်နိုင် – Sport Gaber
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးကျော်နှင့် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦး ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ မန္တလေးမှာ Mandalay PDF (MPDF) ရုံးခန်းဝင်စီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးကျဆုံးတယ်ဆိုတာ တော်ရုံစစ်မြေပြင်မှာတောင် ရှိတောင့်ရှိခဲကိစ္စပါ။ ဘာလို့ ဒီလောက် လွယ်လွယ်ကူကူ သေဆုံးရတာပါလဲ?
တကယ်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်ကို MoreMrontVlog က စုံစမ်းသိရှိတာရှိပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုကြီးမားနိုင်လို့ မရေးဘဲအချိန်တစ်ခုစောင့်နေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်နေ့မှာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖက်က ဒီကိစ္စကို အမှန်အမှားရောထွေးပြီးထုတ်လာတာကြောင့် ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
MoreMrontVlog အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောလိုတာကတော့ ဖြစ်ခဲ့တာကို သင်ခန်းယူပြီး ပြန်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျစေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖိတ်အစင်မရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြလာတဲ့ မန်း PDF ထွန်းတောက်နိုင်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား မေးရင်တော့ မှန်ပါတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဇွန်၂၃ ရက်နေ့ ကားအစီးလိုက် လက်နက်တွေ အဖမ်းခံရကတည်းက ဒီကိစ္စကို သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နီးစပ်သူတွေက MoreMrontVlog ကို ပြောပြလာခဲ့တာပါ။
ဒီနေရာမှာ စစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ဗွီဒီယိုင်ဖိုင်ထဲမှာ မပြောဘဲ ထိန်ချန်ထားတဲ့အချက်အဓိက အချက်တချို့ကိုဆက်ပြောမှာပါ။ မန္တလေးမှာ PDF ရုံးခွဲလေးခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အထဲ စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တာက ရုံးခွဲအမှတ် (၂) မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးနံပါတ် (၁) မှာ အရာရှိအဆင့်နေတာ၊ ရုံးနံပါတ် (၂) မှာ သင်တန်းသားနဲ့သင်တန်းဆရာတွေနေတာ၊ ရုံးနံပါတ် (၃) မှာ လက်နက်ထားတာ၊ ရုံးနံပါတ် (၄) မှာ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေထားတယ် စသဖြင့်ထွက်ဆိုသွားတယ်။
ရန်လင်းအောင် ( ခ) မိုးတိမ်နဲ့ ဝေယံလင်း (ခ) ထွန်းတောက်နိုင်၊ ဗိုလ်နက္ခနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ဦးဟာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ဆီမှာ အပတ်စဉ် (၁) အဖြစ် အစောဆုံး စစ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ မန်း PDF ရုံးဝင်စီးခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ KIA က နှစ်ယောက်၊ DRPA က ၃ ယောက်နဲ့ မန်း PDF က ရဲဘော်တွေ သေဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားပေါ်သေဆုံးသူ ၄ ဦးဟာ လုံး၀ အရပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီက ဒါကို မန်း PDF လို့ တံဆိပ်ကပ်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးအမှတ် (၂) ကိစ္စမှာ လွတ်မြောက်သူ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုပါ စစ်ကောင်စီက အနီးကပ်တေ့ပစ်သတ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့အထိ သတင်းမီဒီယာတချို့မှာ ဗိုလ်ထွန်းတောက်နိုင် နာမည်သုံးဖြေကြားခဲ့သူဟာ အတုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ထွန်းတောက်နိုင်ဟာ ၂၃ ရက်နေ့ကတည်းက အဖမ်းခံထားရတာပါ။ ဒါမှမဟုတ် စစ်တပ်က တမင်ပေးဖြေခိုင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂၂ ရက်နေ့ မန္တလေးဖြစ်စဉ်မှာ ဗိုလ်ထွန်းတောက်နိုင်ဟာ မြေပြင်မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ မိုးတိမ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့နယ်ဘက်ကို လက်နက်သယ်ယူဖို့ မိုးတိမ်နဲ့အတူသွားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၂၂ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မန်း PDF နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုပြောပြတာက စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုးကျော်ဟာ မန်း PDF ဗိုလ်ထွန်းတောက်နိုင်နဲ့ ကြိုပြီး အချိတ်အဆက်ရှိခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲပါတယ်။
ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အောင်မျိုးကျော်
ရုံးအမှတ် (၂) ကို စစ်တပ်က လာဝိုင်းတာဟာ သတင်းအတိအကျရပြီးတော့ ထွန်းတောက်နိုင်ရှိနေချိန်မှာ လာညှိနှိုင်းတဲ့သဘောလို့ သူကဆိုပါတယ်။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟာ ဘာအကာအရံမှ မပါဘဲ ရုံးအမှတ် (၂) ကို ဝင်လာတာဖြစ်ပြီး၊ မထင်မှတ်ဘဲ အောက်မှာစောင့်နေတဲ့ PDF ကင်းနဲ့ ပက်ပင်းတိုးလို့ အနီးကပ်ပစ်ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တာလို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
တချို့ကလည်း ရပ်ကွက်ထဲက သတင်းပေးတစ်ဦးတိုင်ကြားလို့ မသင်္ကာလို့ လာစစ်ရာကနေ ဖြစ်သွားတာလို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သာမန်ဆန္ဒပြသူရှိရာအရပ်ကို A-1 အဆင့်ရှိတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးက လာဖမ်းမလားဆိုတာ စဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ရက် ဇွန် ၂၃ ရက်နေ့မှာတော့ PDF ထွန်းတောက်နိုင်နဲ့ မိုးတိမ်တို့ဟာ မန္တလေး-ကချင်ပြည်နယ်လမ်းကြောင်း သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်ထဲမှာ လက်နက်တွေနဲ့အတူ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ စတင်ပျံ့နှံ့လာပါတယ်။ စစ်ကောင်စီက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေမှာ အမှန်တွေပါသလို၊ ရောထွေးလုပ်ကြံထားတာတွေလည်း ပါပါတယ်။
တဖက်က PDF ဘက်တော်သားတွေနဲ့ လော်ဘီတွေကလည်း ဆင်သေကို ဆိတ်သရေနဲ့ဖုံးဖိဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ သတင်းစားသုံးသူတွေဟာ ဘာက ဘာဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် မသိရပါ။ မန်း PDF ဖြစ်စဉ်မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ မန်းမှာပဲ PDF က တိုက်ပွဲဖော်တယ်လို့ပြောတာတွေ၊ ထွန်းတောက်နိုင်အဖမ်းမခံရဘူးဆိုတာတွေ အကုန်သတင်းမှားတွေပါ။ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာတစ်သိန်းဝန်းကျင် တန်ဘိုးရှိတဲ့ လက်နက်အဖမ်းခံရတဲ့ ကိစ္စဟာ ကြီးမားပါတယ်။
KIA ထုတ် လက်နက်တစ်ရာကျော်အဖမ်းခံရ
မန္တလေးကို ပို့လာတဲ့ လက်နက်ဟာ မန်း PDF တစ်ဖွဲ့တည်းသုံးစွဲဖို့အတွက် ချပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ အောက်ခြေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့တွေကို မျှဝေသုံးစွဲဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါတဲ့ UG တစ်ဦးက MoreMrontVlog ကိုပြောပြပါတယ်။ သူ့ပြောဆိုချက်က မှန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဘာလို့ဆို ထွန်းတောက်နိုင်က “မန္တလေးမှာ မန်း-PDF တစ်ဖွဲ့တည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ” လို့ပြောဆိုတာနဲ့ တူညီနေလို့ပါ။
ဇွန် ၂၃ ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကချင်ပြည်နယ်ဘက်က ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကလည်း ထွန်းတောက်နိုင်ဟာ စစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးအဖြစ် ပိပိရိရိလုပ်နေခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုကြတာရှိပါတယ်။ KIA နဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါတွေဆိုတာ ထွန်းတောက်နိုင်ဟာ အခုချိန်မှာ စာရင်းပေးပြီးလောက်သလို၊ စစ်ကောင်စီကလည်း တောနင်းလိုက်ရှာနေလောက်ပါပြီ။
ဥပမာ မနေ့က စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ဖိုင်မှာ KIA က အရာရှိ အောင်ကြီး ဆိုတဲ့နာမည်ကအစ အသေးစိတ်ပြောဆိုတာမျိုး ပါလာပါတယ်။ မန်းမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ PDF အဖွဲ့အပြင် တခြားအဖွဲ့တွေကိုပါ ထွန်းတောက်နိုင် ဖော်ကောင်လုပ်ထားပါပြီ။
မန်း PDF ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဖော်ကောင် ထွန်းတောက်နိုင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့် ” ထွန်းတောက်နိုင်သတင်းပေးလိုက်တာ အခုဆို မန္တလေးမှာ အဖမ်းခံရတာ တစ်ရာလောက်ရှိနေပြီ။ မန္တလေးမှာ လှုပ်ရှားဖို့ ခိုလှုံနေတဲ့ အဖွဲ့တွေလည်း အကုန်ပြေးနေရပြီ” လို့ မန်း PDF နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရမှုများတဲ့အထဲမှာ သူ့အဖွဲ့ကလူတွေလည်းပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ထွန်းတောက်နိုင်က စစ်ကောင်စီဆီမှာ လူစုဆောင်းရေးကိစ္စကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေးမှာ အပတ်စဉ် ၂ ခုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လူအင်အား ၁၀၀ ကျော်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်း မှန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ နောက်ပြီး ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာလည်း ထွန်းတောက်နိုင်ဟာ စိတ်မသက်မသာပြဟန် တစက်မျှ မရှိပါဘူး။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ချရေးပြီးသား (scripted) ကို ပြောဆိုသွားတာပါ။
ဒီနေရာမှာထွန်းတောက်နိုင် လုံး၀ ထုတ်မပြောတာက အလှူငွေကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ သူမပြောပေမယ့် စစ်ကြောရေးမှာတော့ ထွက်ချက်ပေးပြီးလောက်ပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီး ဆယ်လီတစ်ဦးကမနေ့က ဒီကိစ္စကို ထုတ်ပြောလာပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နာမည်ခံထားပြီးတော့မှ တကယ်တမ်းငွေပေးတဲ့အခါ MDPF မပေးဘဲ တခြားအဖွဲ့ပေးတာမျိုး လက်မခံဘူးပြောလာတာမျိုးရှိပါတယ်။
ထွန်းတောက်နိုင်ဖော်တဲ့အထဲမှာ အဓိကပြောသွားတာ ငွေကြေးနဲ့နေရာကိစ္စကို စက်မှုဇုံက လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ သကြားစက်ရုံတွေလို့ဆိုသွားပါတယ်။ ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲက အင်မတန်ဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းတာတွေ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ အဆိုးဆုံးက ပြည်သူပိုင်ဆိုပြီး (nationalize) လုပ်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီအတွက် ထွန်းတောက်နိုင်က လိုလိုလားလားပြောပေးနေတဲ့အချက်က သူဟာ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် စစ်တပ်နဲ့အပေးအယူလုပ်ပြီး ” ဖော်ကောင်” လုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့တော်လှန်ရေး ရဲဘော်တွေစွပ်စွဲသလို “မူလကတည်းက စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အဆင့်မြင့် ဒလန် (ဝါ) သူလျှို” ဖြစ်မှာပါ။
ဥပမာ အားဖြင့် ဖောက်ခွဲရေးကိစ္စကို ကျနော်လည်းမကြိုက်ဘူး၊ ထွက်ဖို့ ၂ ခါလည်း ကြိုးစားခဲ့တယ် သူတို့ပေးမထွက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ သူဟာအပြစ်ကင်းပါကြောင်း၊ အသုံးချခံရကြောင်း ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့စကားတွေလို့ဆိုရမှာပါ။ မန်း PDF ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုထိလွတ်နေတာ သူနဲ့မိုးတိမ်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မိုးတိမ်ကို သိပ်မတွေ့ရသလို၊ ဘယ်လိုအခြေအနေရှိသလဲ မသိရပါ။
အဖမ်းခံထားရတဲ့ MPDF ဗိုလ်ထွန်းတောက်နိုင်
မန်း PDF ထွန်းတောက်နိုင် ထွက်ဆိုချက်ပေးတဲ့အထဲမှာ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ပါ စစ်ကောင်စီက (Psywar) ထည့်ထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရုံးခွဲဖွင့်ဖို့ကိစ္စက အစ KIA က ညွှန်ကြားတယ်ဆိုတာရယ်၊ မီဒီယာ ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါ။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာတိုက်တွေဟာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မဆို သတင်းရရှိဖို့အတွက် ဆက်သွယ်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ ISIS လို အဖွဲ့တွေနဲ့တောင် ဆက်သွယ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သတင်းစာဆရာရဲ့အလုပ်ပါ။
နောက် ထင်ရှားတဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး စာသားကတော့ “လက်နက်မိတာ ကျနော်တော့ ဝမ်းသာတယ်။ ဘာလို့ဆို ဒီလက်နက်တွေက မန္တလေးတစ်မြို့လုံးပျက်စီးသွားစေနိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ပါ။ ဒါဟာ စစ်တပ်ကရေးပေးထားတဲ့အချက် ပေါ်လွင်ပြီးတော့ သာမန်အရပ်သားတွေကို ” ငါတို့မြို့တော့ အထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်အောင်” တွန်းတဲ့စာ၊ စိတ်လည်လာအောင် မြူဆွယ်တဲ့ ဝါဒဖြန့်စာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖိတ်အစင်မရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးဆိုတာ မရှိပါ။ မြို့နာမှာစိုးလို့ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အတွေး ခင်များရဲ့စိတ်ထဲ နေရာယူသွားမယ်ဆို ခင်များဟာ စစ်ဖိနပ်အောက်ကို ပြန်သွားဖို့ အတွေး၀င်တာနဲ့တူပါတယ်။
ကျူးဘားရဲ့ တော်လှန်ရေးဖခင်ကြီး Che Guevara ” ချေ” က အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
“တော်လှန်ရေးဆိုတာ သူ့အလိုလိုမှည့်လို့ ကြွေကြလာတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးမဟုတ်ဘူး။ မင်းကိုယ်တိုင် အဲဒီပန်းသီးကြွေကြအောင်လှုပ်ချရတာ”
ဒုဗိုလျမှူးကွီးအောငျမြိုးကြောျနှင့ျ ဗိုလျကွီးတဈဦး ဇှနျလ ၂၂ ရကျနေ့ မန်တလေးမှာ Mandalay PDF (MPDF) ရုံးခနျးဝငျစီးခံရတဲ့ဖွဈစဉျမှာ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။ ဒုဗိုလျမှူးကွီး တဈဦးကဆြုံးတယျဆိုတာ တောျရုံစဈမွပွေငျမှာတောငျ ရှိတောင့ျရှိခဲကိစ်စပါ။ ဘာလို့ ဒီလောကျ လှယျလှယျကူကူ သဆေုံးရတာပါလဲ?
တကယျတော့ ဒီဖွဈစဉျကို MoreMrontVlog က စုံစမျးသိရှိတာရှိပမေယ့ျ နောကျဆကျတှဲသကျရောကျမှုကွီးမားနိုငျလို့ မရေးဘဲအခြိနျတဈခုစောင့ျနခေဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဇူလိုငျ ၁၂ ရကျနေ့မှာ အာဏာသိမျးစဈတပျဖကျက ဒီကိစ်စကို အမှနျအမှားရောထှေးပွီးထုတျလာတာကွောင့ျ ရေးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။
MoreMrontVlog အနနေဲ့ ဒီနရောမှာ အဓိကပွောလိုတာကတော့ ဖွဈခဲ့တာကို သငျခနျးယူပွီး ပွနျပွငျဆငျနိုငျဖို့ပါ။ စိတျဓာတျကစြဖေို့ မဟုတျပါဘူး။ အဖိတျအစငျမရှိတဲ့ တောျလှနျရေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောင့ျ စိတျကို ခိုငျခိုငျမာမာပွငျဆငျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
စဈကောငျစီက ထုတျပွလာတဲ့ မနျး PDF ထှနျးတောကျနိုငျဆိုတာ ဟုတျပါသလား မေးရငျတော့ မှနျပါတယျလို့ ပွောရမှာပါ။ ဇှနျ၂၃ ရကျနေ့ ကားအစီးလိုကျ လကျနကျတှေ အဖမျးခံရကတညျးက ဒီကိစ်စကို သကျဆိုငျတဲ့အဖှဲ့အစညျးနဲ့နီးစပျသူတှကေ MoreMrontVlog ကို ပွောပွလာခဲ့တာပါ။
ဒီနရောမှာ စဈကောငျစီက ထုတျပွနျတဲ့ ဗှီဒီယိုငျဖိုငျထဲမှာ မပွောဘဲ ထိနျခနြျထားတဲ့အခကြျအဓိက အခကြျတခြို့ကိုဆကျပွောမှာပါ။ မန်တလေးမှာ PDF ရုံးခှဲလေးခု ဖှင့ျလှဈခဲ့တဲ့အထဲ စီးနငျးတိုကျခိုကျမှုဖွဈတာက ရုံးခှဲအမှတျ (၂) မှာဖွဈပါတယျ။
ရုံးနံပါတျ (၁) မှာ အရာရှိအဆင့ျနတော၊ ရုံးနံပါတျ (၂) မှာ သငျတနျးသားနဲ့သငျတနျးဆရာတှနေတော၊ ရုံးနံပါတျ (၃) မှာ လကျနကျထားတာ၊ ရုံးနံပါတျ (၄) မှာ ဖောကျခှဲရေးပစ်စညျးတှထေားတယျ စသဖွင့ျထှကျဆိုသှားတယျ။
ရနျလငျးအောငျ ( ခ) မိုးတိမျနဲ့ ဝယေံလငျး (ခ) ထှနျးတောကျနိုငျ၊ ဗိုလျနက်ခနဲ့ နောကျထပျတဈဦးဟာ ကခငြျလှတျလပျရေးတပျမတောျ (KIA) ဆီမှာ အပတျစဉျ (၁) အဖွဈ အစောဆုံး စဈသငျတနျးတကျရောကျခဲ့သူတှထေဲမှာ ပါပါတယျ။ မနျး PDF ရုံးဝငျစီးခံရတဲ့ ဖွဈစဉျမှာ KIA က နှဈယောကျ၊ DRPA က ၃ ယောကျနဲ့ မနျး PDF က ရဲဘောျတှေ သဆေုံးတာဖွဈပါတယျ။ ကားပေါျသဆေုံးသူ ၄ ဦးဟာ လုံး၀ အရပျသားတှဖွေဈပါတယျ။
စဈကောငျစီက ဒါကို မနျး PDF လို့ တံဆိပျကပျပွီး သတျပဈလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ရုံးအမှတျ (၂) ကိစ်စမှာ လှတျမွောကျသူ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယျ။ ဖမျးဆီးရမိသူတှကေိုပါ စဈကောငျစီက အနီးကပျတေ့ပဈသတျခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ဂနြီဗာကှနျဗငျးရှငျးကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျးခြိုးဖောကျတာဖွဈပါတယျ။
ဇူလိုငျ ၂၄ ရကျနေ့အထိ သတငျးမီဒီယာတခြို့မှာ ဗိုလျထှနျးတောကျနိုငျ နာမညျသုံးဖွကွေားခဲ့သူဟာ အတုဖွဈပါတယျ။ ဘာလို့ဆို ထှနျးတောကျနိုငျဟာ ၂၃ ရကျနေ့ကတညျးက အဖမျးခံထားရတာပါ။ ဒါမှမဟုတျ စဈတပျက တမငျပေးဖွခေိုငျးတာဖွဈပါလိမ့ျမယျ။
၂၂ ရကျနေ့ မန်တလေးဖွဈစဉျမှာ ဗိုလျထှနျးတောကျနိုငျဟာ မွပွေငျမှာရှိမနခေဲ့ပါဘူး။ သူဟာ မိုးတိမျနဲ့ကခငြျပွညျနယျ မနျစီမွို့နယျဘကျကို လကျနကျသယျယူဖို့ မိုးတိမျနဲ့အတူသှားနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။၂၂ ရကျနေ့ဖွဈစဉျနဲ့ပတျသတျပွီး မနျး PDF နဲ့ခြိတျဆကျဆောငျရှကျတဲ့ အဖှဲ့တဈခုပွောပွတာက စဈကောငျစီရဲ့ဒုဗိုလျမှူးကွီး အောငျမြိုးကြောျဟာ မနျး PDF ဗိုလျထှနျးတောကျနိုငျနဲ့ ကွိုပွီး အခြိတျအဆကျရှိခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲပါတယျ။
ပဈခတျခံရပွီးသဆေုံးသှားတဲ့ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အောငျမြိုးကြောျ
ရုံးအမှတျ (၂) ကို စဈတပျက လာဝိုငျးတာဟာ သတငျးအတိအကရြပွီးတော့ ထှနျးတောကျနိုငျရှိနခြေိနျမှာ လာညှိနှိုငျးတဲ့သဘောလို့ သူကဆိုပါတယျ။ ဒုဗိုလျမှူးကွီးဟာ ဘာအကာအရံမှ မပါဘဲ ရုံးအမှတျ (၂) ကို ဝငျလာတာဖွဈပွီး၊ မထငျမှတျဘဲ အောကျမှာစောင့ျနတေဲ့ PDF ကငျးနဲ့ ပကျပငျးတိုးလို့ အနီးကပျပဈခံရပွီး သဆေုံးခဲ့တာလို့ သူက ရှငျးပွပါတယျ။
တခြို့ကလညျး ရပျကှကျထဲက သတငျးပေးတဈဦးတိုငျကွားလို့ မသငျ်ကာလို့ လာစဈရာကနေ ဖွဈသှားတာလို့ဆိုကွပွနျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သာမနျဆန်ဒပွသူရှိရာအရပျကို A-1 အဆင့ျရှိတဲ့ ဒုဗိုလျမှူးကွီး အဆင့ျရှိသူတဈဦးက လာဖမျးမလားဆိုတာ စဉျးစားရမယ့ျအခကြျဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈရကျ ဇှနျ ၂၃ ရကျနေ့မှာတော့ PDF ထှနျးတောကျနိုငျနဲ့ မိုးတိမျတို့ဟာ မန်တလေး-ကခငြျပွညျနယျလမျးကွောငျး သပိတျကငြျးမွို့နယျထဲမှာ လကျနကျတှနေဲ့အတူ ဖမျးမိတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ စတငျပြံ့နှံ့လာပါတယျ။ စဈကောငျစီက ထုတျပွနျတဲ့ သတငျးတှမှော အမှနျတှပေါသလို၊ ရောထှေးလုပျကွံထားတာတှလေညျး ပါပါတယျ။
တဖကျက PDF ဘကျတောျသားတှနေဲ့ လောျဘီတှကေလညျး ဆငျသကေို ဆိတျသရနေဲ့ဖုံးဖိဖို့ကွိုးစားကွပါတယျ။ သတငျးစားသုံးသူတှဟော ဘာက ဘာဆိုတာကို မှနျမှနျကနျကနျ မသိရပါ။ မနျး PDF ဖွဈစဉျမှာလညျး အလားတူပါပဲ။ မနျးမှာပဲ PDF က တိုကျပှဲဖောျတယျလို့ပွောတာတှေ၊ ထှနျးတောကျနိုငျအဖမျးမခံရဘူးဆိုတာတှေ အကုနျသတငျးမှားတှပေါ။ အနညျးဆုံး ဒေါျလာတဈသိနျးဝနျးကငြျ တနျဘိုးရှိတဲ့ လကျနကျအဖမျးခံရတဲ့ ကိစ်စဟာ ကွီးမားပါတယျ။
KIA ထုတျ လကျနကျတဈရာကြောျအဖမျးခံရ
မန်တလေးကို ပို့လာတဲ့ လကျနကျဟာ မနျး PDF တဈဖှဲ့တညျးသုံးစှဲဖို့အတှကျ ခပြေးတာမြိုး မဟုတျဘူးလို့သိရပါတယျ။ အောကျခွမှောလှုပျရှားနတေဲ့ အဖှဲ့တှကေို မြှဝသေုံးစှဲဖို့ဖွဈတယျလို့ ထဲထဲဝငျဝငျပါတဲ့ UG တဈဦးက MoreMrontVlog ကိုပွောပွပါတယျ။ သူ့ပွောဆိုခကြျက မှနျတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ ဘာလို့ဆို ထှနျးတောကျနိုငျက “မန်တလေးမှာ မနျး-PDF တဈဖှဲ့တညျးရှိတာမဟုတျပါဘူး။ တခွားအဖှဲ့တှလေညျးရှိနပေါတယျ။ ” လို့ပွောဆိုတာနဲ့ တူညီနလေို့ပါ။
ဇှနျ ၂၃ ဖွဈစဉျနောကျပိုငျးမှာတော့ ကခငြျပွညျနယျဘကျက ယုံကွညျရတဲ့ သတငျးရငျးမွဈတခြို့ကလညျး ထှနျးတောကျနိုငျဟာ စဈတပျရဲ့သတငျးပေးအဖွဈ ပိပိရိရိလုပျနခေဲ့တယျလို့ ပွောဆိုကွတာရှိပါတယျ။ KIA နဲ့ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျနတေဲ့ ဘယျသူ ဘယျဝါတှဆေိုတာ ထှနျးတောကျနိုငျဟာ အခုခြိနျမှာ စာရငျးပေးပွီးလောကျသလို၊ စဈကောငျစီကလညျး တောနငျးလိုကျရှာနလေောကျပါပွီ။
ဥပမာ မနေ့က စဈကောငျစီကထုတျပွနျတဲ့ဖိုငျမှာ KIA က အရာရှိ အောငျကွီး ဆိုတဲ့နာမညျကအစ အသေးစိတျပွောဆိုတာမြိုး ပါလာပါတယျ။ မနျးမှာ ရောကျရှိနတေဲ့ PDF အဖှဲ့အပွငျ တခွားအဖှဲ့တှကေိုပါ ထှနျးတောကျနိုငျ ဖောျကောငျလုပျထားပါပွီ။
မနျး PDF ဖွဈစဉျနဲ့ ဖောျကောငျ ထှနျးတောကျနိုငျရဲ့နောကျဆကျတှဲကွောင့ျ ” ထှနျးတောကျနိုငျသတငျးပေးလိုကျတာ အခုဆို မန်တလေးမှာ အဖမျးခံရတာ တဈရာလောကျရှိနပွေီ။ မန်တလေးမှာ လှုပျရှားဖို့ ခိုလှုံနတေဲ့ အဖှဲ့တှလေညျး အကုနျပွေးနရေပွီ” လို့ မနျး PDF နဲ့ခြိတျဆကျဆောငျရှကျနတေဲ့အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
ဖမျးဆီးခံရမှုမြားတဲ့အထဲမှာ သူ့အဖှဲ့ကလူတှလေညျးပါတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ထှနျးတောကျနိုငျက စဈကောငျစီဆီမှာ လူစုဆောငျးရေးကိစ်စကိုပွောခဲ့ပါတယျ။ မန်တလေးမှာ အပတျစဉျ ၂ ခုပေးနိုငျခဲ့ပွီး လူအငျအား ၁၀၀ ကြောျဝနျးကငြျဆိုတာလညျး မှနျတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ နောကျပွီး ဖွဆေိုတဲ့အခါမှာလညျး ထှနျးတောကျနိုငျဟာ စိတျမသကျမသာပွဟနျ တစကျမြှ မရှိပါဘူး။ သကျတောင့ျသကျသာနဲ့ ခရြေးပွီးသား (scripted) ကို ပွောဆိုသှားတာပါ။
ဒီနရောမှာထှနျးတောကျနိုငျ လုံး၀ ထုတျမပွောတာက အလှူငှကေိစ်စဖွဈပါတယျ။ သူမပွောပမေယ့ျ စဈကွောရေးမှာတော့ ထှကျခကြျပေးပွီးလောကျပွီလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ နာမညျကွီး ဆယျလီတဈဦးကမနေ့က ဒီကိစ်စကို ထုတျပွောလာပါတယျ။ ဥပမာအားဖွင့ျ နာမညျခံထားပွီးတော့မှ တကယျတမျးငှပေေးတဲ့အခါ MDPF မပေးဘဲ တခွားအဖှဲ့ပေးတာမြိုး လကျမခံဘူးပွောလာတာမြိုးရှိပါတယျ။
ထှနျးတောကျနိုငျဖောျတဲ့အထဲမှာ အဓိကပွောသှားတာ ငှကွေေးနဲ့နရောကိစ်စကို စကျမှုဇုံက လုပျငနျးရှငျတှေ၊ စားသောကျဆိုငျတှေ၊ သကွားစကျရုံတှလေို့ဆိုသှားပါတယျ။ ဒီရဲ့နောကျဆကျတှဲက အငျမတနျဆိုးရှားပါလိမ့ျမယျ။ လုပျငနျးပိတျသိမျးတာတှေ၊ ဖမျးဆီးတာတှေ၊ အဆိုးဆုံးက ပွညျသူပိုငျဆိုပွီး (nationalize) လုပျတာမြိုးတှကွေုံရနိုငျပါတယျ။
စဈကောငျစီအတှကျ ထှနျးတောကျနိုငျက လိုလိုလားလားပွောပေးနတေဲ့အခကြျက သူဟာ ဖမျးဆီးခံရပွီးနောကျ စဈတပျနဲ့အပေးအယူလုပျပွီး ” ဖောျကောငျ” လုပျတာ၊ ဒါမှမဟုတျ ခြိတျဆကျလုပျကိုငျတဲ့တောျလှနျရေး ရဲဘောျတှစှေပျစှဲသလို “မူလကတညျးက စိမ့ျဝငျနတေဲ့ အဆင့ျမွင့ျ ဒလနျ (ဝါ) သူလြှို” ဖွဈမှာပါ။
ဥပမာ အားဖွင့ျ ဖောကျခှဲရေးကိစ်စကို ကနြောျလညျးမကွိုကျဘူး၊ ထှကျဖို့ ၂ ခါလညျး ကွိုးစားခဲ့တယျ သူတို့ပေးမထှကျဘူးဆိုတဲ့ စကားတှဟော သူဟာအပွဈကငျးပါကွောငျး၊ အသုံးခခြံရကွောငျး ဇာတျတိုကျထားတဲ့စကားတှလေို့ဆိုရမှာပါ။ မနျး PDF ဖွဈစဉျကို ကွည့ျမယျဆိုရငျ အခုထိလှတျနတော သူနဲ့မိုးတိမျပဲရှိပါတယျ။ ဒီနရောမှာ မိုးတိမျကို သိပျမတှေ့ရသလို၊ ဘယျလိုအခွအေနရှေိသလဲ မသိရပါ။
အဖမျးခံထားရတဲ့ MPDF ဗိုလျထှနျးတောကျနိုငျ
မနျး PDF ထှနျးတောကျနိုငျ ထှကျဆိုခကြျပေးတဲ့အထဲမှာ စိတျဓာတျစဈဆငျရေးအတှကျပါ စဈကောငျစီက (Psywar) ထည့ျထားပါတယျ။ ဥပမာအားဖွင့ျ ရုံးခှဲဖှင့ျဖို့ကိစ်စက အစ KIA က ညှှနျကွားတယျဆိုတာရယျ၊ မီဒီယာ ဘယျအဖှဲ့တှနေဲ့ဆကျသှယျတယျဆိုတာမြိုးတှပေါ။
ကမ်ဘာအရပျရပျမှာရှိတဲ့ သတငျးမီဒီယာတိုကျတှဟော ဘယျအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့မဆို သတငျးရရှိဖို့အတှကျ ဆကျသှယျရပါတယျ။ ကမ်ဘာပေါျမှာ နာမညျဆိုးနဲ့ကြောျကွားတဲ့ ISIS လို အဖှဲ့တှနေဲ့တောငျ ဆကျသှယျကွပါတယျ။ ဒါဟာ သတငျးစာဆရာရဲ့အလုပျပါ။
နောကျ ထငျရှားတဲ့ စိတျဓာတျစဈဆငျရေး စာသားကတော့ “လကျနကျမိတာ ကနြောျတော့ ဝမျးသာတယျ။ ဘာလို့ဆို ဒီလကျနကျတှကေ မန်တလေးတဈမွို့လုံးပကြျစီးသှားစနေိုငျတယျ” ဆိုတဲ့ပွောဆိုခကြျပါ။ ဒါဟာ စဈတပျကရေးပေးထားတဲ့အခကြျ ပေါျလှငျပွီးတော့ သာမနျအရပျသားတှကေို ” ငါတို့မွို့တော့ အထိခိုကျမခံနိုငျဘူးဆိုတဲ့ စိတျကို ဖွဈပေါျအောငျ” တှနျးတဲ့စာ၊ စိတျလညျလာအောငျ မွူဆှယျတဲ့ ဝါဒဖွန့ျစာ ဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာပေါျမှာ အဖိတျအစငျမရှိတဲ့ တောျလှနျရေးဆိုတာ မရှိပါ။ မွို့နာမှာစိုးလို့ မလုပျသင့ျဘူးဆိုတဲ့အတှေး ခငျမြားရဲ့စိတျထဲ နရောယူသှားမယျဆို ခငျမြားဟာ စဈဖိနပျအောကျကို ပွနျသှားဖို့ အတှေးဝငျတာနဲ့တူပါတယျ။
ကြူးဘားရဲ့ တောျလှနျရေးဖခငျကွီး Che Guevara ” ခြေ” က အခုလိုပွောခဲ့ပါတယျ။
“တောျလှနျရေးဆိုတာ သူ့အလိုလိုမှည့ျလို့ ကွှကွေလာတဲ့ ပနျးသီးတဈလုံးမဟုတျဘူး။ မငျးကိုယျတိုငျ အဲဒီပနျးသီးကွှကွေအောငျလှုပျခရြတာ”